सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले थप पहिरोको जोखिम बढ्यो ! « MNTVONLINE.COM
सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले थप पहिरोको जोखिम बढ्यो !
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रविन्दू बनाएर गएको बुधबार विहानको ५.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले थप क्षति गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । केही दिन यता सिन्धुपाल्चोकमा ठूला पहिरो गएका छन् ।
भूकम्पले पहिरोको जोखिम थप बढेको छ, जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायहरुलाई अलर्ट रहन निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताए । भूकम्पका कारण जमिन कमजोर भएकाले यस वर्षको वर्षामा पहिरोले पनि सबैभन्दा धेरै क्षति सिन्धुपाल्चोकमै पुर्याएको छ ।
बुधबार विहान महसुस गरिएको भूकम्प काठमाडौं उपत्यका र अन्य छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत महसुस गरिएको थियो ।